Madaxweyne Xasan oo Xafiiskiisa kulan Xasaasi ah kula yeeshay Wafdi ka socday Midowga Yurub. (Warbixin Muhiim ah).	| Salaan Media
Madaxweyne Xasan oo Xafiiskiisa kulan Xasaasi ah kula yeeshay Wafdi ka socday Midowga Yurub. (Warbixin Muhiim ah).
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Md. Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta Xafiiskiisa kula kulmay wafdi ka socday Midowga Yurub oo uu hoggaaminayay Erik Solheim oo Midowga Yurub u wakiilatay xiriiriyaha shir loo qabanayo Soomaaliya.
Afhayeenka Madaxweynaha Soomaaliya Eng C/raxmaan Cumar Cusman Yariisow ayaa sheegay in Wafdiga iyo madaxweynaha ay ka wada hadleen sidii loo dardar galin lahaa shir 16-ka bisha September ka furmi doona magaalada Brussels ee dalka Belgium, kaasoo looga hadli doono sidii loo taageeri lahaa dowaldda Soomaaliya.
Eng Yariisow waxa uu sheegay in Midowga Yurub ay ka go’an tahay sidii shirkaasi uu u noqon lahaa mid mira dhal ah, dowladda Soomaaliyana ay la tagi doonto qorshe dalka dib loogu dhisayo.
Dhanka kale, Mr Erik Solheim ayaa uga mahadceliyey madaxweynaha qaabilaadiisa, warbixinna ka siiyey Shirka 16ka September 2013 ee ka dhacaya Brussels sheegeyna in Midowga Yurub ay ka go’antahay sidii shirkaas uu u noqon lahaa mid miro dhal ah, isla markaana ay Soomaaliya la imaan doono COMPACT ku qeexan sidii dalka dib loogu dhisi lahaa iyo sida ay dowladdu mudnaanta u kala siineyso howlaha ay rabto inay qabato.
Erik Solheim ayaa sheegey inay muhiim tahay in Dowladda Soomaaliyeed la dhageysto bacdamaa Midowga Yurub uu rabo in Soomaalida waxa ay rabaan la fuliyo.
Ugu dambeyntii, Heshiis fog kadib oo aan Saxaafadda loo soo bandhigin, ayaa waxaa Madaxweyne Xasan Shiikh uu ka dalbaday Midowga Yurub in ay kala shaqeeyaan sidii looga dhabeyn lahaa ballanqaadyada dhinaca taageerada, dowladdana ay diyaarisay nidaam dhinaca maaliyadda ah oo kalsooni siin kara dalalka deeqaha bixiya.